Hiran State - News: Daawo Videowgan nin sheegaty inuu yahay la taliyaha Shiikh Shariif sida uu u hadlayo (Qaran iyo qabiil maxaa kala heysta)
Daawo Videowgan nin sheegaty inuu yahay la taliyaha Shiikh Shariif sida uu u hadlayo (Qaran iyo qabiil maxaa kala heysta)
Fadlan markaad daawado qudbada meesha ugu danbeysa oo uu kaka hadlayo reer Hiiraan aqri qoraalka Vedowga ka hooseeya waa kuma General Subxaanyo.
Dabcan muwaadin kasta oo Somaliyeed xaq ayuu u leeyahay inuu wadanka Somaliya ugu noolaado meeshii uu Ilaah ugu talo galay. sidookale marka qof uu shacabka Somaliyeed oo degan meel ka mid ah dhulka Somaliya doonayo inuu wax ka sheego waxaa haboon inuu wax ka sheego isagoon sheeganeyn masuuliyad Qaran amaba aheyn La taliye Madaxweyne iyo wax la mid ah.
Hadaba Waa kuma Gneral Subxaanyahan ku dhashay magaalda Belet Weyne hadane leh reer Hiiraan waa Amxaaro.
Ninka magacan wata markii uu na soo gaaray muuqaalka Vedeowgan waxaanu u dirnay in ka badan 20 ruux oo reer Belet weyne ah kedibna 5 ka mid ah ayaa inoo sheegtay taariikhdiisa oo kooban waeyna inoogu sheegeen intaan.
1- General Subxaanyo magaciisa oo full ah waxaa la yiraahdaa Cabdulqadir Cali Mire.
2- XIlkan uu sheeganayo ee Generalnimo waxaa u magacaabay Cabdiqaasim Salaad Hasan xiligii uu madaxweynaha ahaa.
3-Waa nin Habargidir, Ceyr, Ayaanle ah waxeyna qaraabo yahiin ninka shirka London abaabulaya ee leh waxaan heshiisiinayaa reer Hiiraan.
Marka aad ninkani muuqaalkiisa aragto waa nin ay ka muuqato neceyb gaar ah markaad eegto sida uu uga beensheegayo qaabkii loo dhisay maamulkii Midland ee uu fikirkiisa lahaa Alle ha u naxariistee C/karin Farah Laqanyo.isagoo yiri waxaa maamulkaasi dhisay 3 nin kedibna waxaa lagu yeeshay lacag ay qaad ku cuneen iyagoo garan waayey wax ay sameeyaan ayey ku dhawaaqeen maamulkii Midland kedibna dowlada Ethiopia ayaa dhaqaalo siisay.
Mar uu ka hadlayey reer Hiiraan ereyada uu isticmaalay adiga fasiro.
Waxaa waxaasi oo dhan ka sii daran Somaliya maalinkasta waxey shacabku isweydiiyaan dowlada kumeel gaarka maxaa ka qaldan bal ka waran nin meel public ah ka leh waxaan ahey la taliyey madaxwynaha Somaliya hadane sidan u hadlayo ma nin qaranbaa mise waa nin qabiil?
Qofku haduusan wax masuuliyad ah heynin waa ok oo Somalida iney mararka qarkood calooshooda ka hadlaan wey fiican tahay laakinse arintaan sidey kula tahay hadaad tahay muwaadin Somaliyeed amaba reer Hiiraan ah.
Shirarka siyaasadeed ee hada abaabulkooda laga bilaabay London dadka hogaaminaya midabkooda rasmiga ah waa kuwan oo kale marka filo goor dhaw muuqaalo kale haduusan jawaab deg deg ah ka bixin arintaan ninka ay quseyso in sida uu sheegtay marka uu qudbadaan duubayey uu ahaa la taliyaha Shiikh Shariif dowladuse maxey arintaan ka ogtahay?
· admin on July 28 2011 08:10:34 · 0 Comments · 2547 Reads ·
14,606,061 unique visits